« Nanontany ny mpianany Izy (Jesosy) ka nanao hoe : Ataon’ny olona ho iza moa Aho ? Dia hoy ireo: Hoy ny sasany: Jaona Mpanao batisa; ary hoy ny sasay: Elia; ary hoy ny sasany: Jeremia, na anankiray amin’ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy: Fa iaanreo kosa mana Ahy ho iza? Ary namely Simona Petera ka nanao hoe: Ianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra velona.” Matio 16:13-16
Fanotaniana vitsivitsy ao amin’ny Baiboly
Nametraka fanotaniana roa tamin’ny mpianany Jesosy, voalohany : “Ataon’ny olona ho iza moa Aho?” Ny valinteny nomen’izy ireo dia ny hevitra nalaza tamin’izany fotoana izany. Ilaina ny mahafantatra izany. Ilaina ny mahafantatra ny gevitry hafa, saingy tsy mamatotra antsika izany. Dia nametraka fanotaniana izay hafa amin’izy ireo indray àry Jesosy hoe: “Fa ianareo kosa manao Ahy ho iza? Teo ny mpianatra dia tsy maintsy milaza ny heviny sy ny faharesen-dahatra manokana tao anatiny. Ka nihiaka Petera hoe: “Ianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra velona”.
Miantefa amiko koa izany fanotaniana izany: iza moa Jesosy amiko? Tsy afaka mialokaloka ao ambadiky ny hevitry ny hafa aho, fa tsy maintsy manome ny valin-teniko manokana, dia ilay tena izy, tsy miolakolaka. Ao amin’ny filazantsara no ahitako izany valinteny izany. Ao no ahitako fa Jesosy dia olona mitovy amin’ny hafa ihany, raha jerena ety ivelany: nahatsiaro noana sy nangetaheta ary sasatra Izy, nahatsapa alahelo sy fifaliana. Saingy tena tsy manan-tsahala kosa Jesosy, mihoatra lavitra noho ny olona: Andriamanitra mihitsy Izy, ary ilay hany làlana ahazoana manatona an’Andriamanitra. Afaka mamela heloka Izy (Marka 2:7-12) sy manome fiainana mandrakizay (Jaona 10:28). Nanambara Izy fa ho Mpitsara ny olona rehetra.
Tena zava-dehibe izao fanotaniana izao: iza moa Jesosy, amiko manokana? Mandà Azy ve aho, sa kosa vonona hihaino ilay tia ahy sady nanaporofo izany? Tsy aminy ve aho no afaka miresaka, na dia mihambahamba fatratra aza, momba ny faharatsiana ato anatin’ny foko, momba ny fahotako sy ny fahadisoako? Afaka manao izany aho satria matoky fa te ho Mpamonjy sy Mpitaridalana ahy Izy.